Dib u habaynta cashuuraha Maraykanka oo la isku maandhaafsanyahay - BBC News Somali
Dib u habaynta cashuuraha Maraykanka oo la isku maandhaafsanyahay
Image caption Madaxweyne Trump oo ka hadlaya cashuuraha
Waxa soo baxay qorshe xisbiga Jamhuuriga ah ee Maraykanku ku doonayo in uu ku dhaqan geliyo dib u habayn dhanka cashuuraha ah oo noqonaya kii ugu waynaa ee muddo soddon sanadood iyo dheeraad ah dalka laga hirgeliyo.
Dib u habaynta cashuuraha ayaa ahayd wax yaabaha mudnaanta koobaad uu siinayey madaxweyne Trump ee arimaha gudaha. Qorshahan uu soo bandhigayna waxa ka mid ah in cashuur dhimis boqolkiiba labaatan ilaa shan iyo soddon ah loo sameeyo shirkadaha ganacsiga, laakiin ilaa hadda ma cadda sida loo hirgelin doono qorshahan.
Madaxweyne Trump oo ka hadlayey Aqalka Cad ayaa sheegay in maamulkiisu ka shaqaynayo sidii dalka Maraykanku u noqon lahaa dalka dunida ugu fiican ee maalgashadeyaashu ku soo hirtaan. Waxaanu intaa ku daray in dib u habaynta cashuuraha ee xisbigiisa Jamhuurigu doonayo ay ka faa'iidi doonaan dadka caadiga ah ee Maraykanka. Waxaanu yidhi "waxaanu ka shaqeynaynaa sidii shacabka Maraykanka aanu u siin lahayn canshuur dhimis weyn oo ay ugu dabaldagaan ciida masiixiga, waana canshuur dhimistii ugu weynayd taariikhda dalka waxa ayna noqon doonta dib u habeyn dhanka canshuuraha oo shaqooyin abuuri doonta"
Hase yeeshee hogaamiyaha xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ah kaga jira Congress-ka Nansi Pelosi aya sheegtay in qorshahani yahay mid aan si fiican looga fiirsan oo keeni doona khasaare aan laga soo waaqsan.
"Xisbiga Jamhuuriga waxay shyacabka maraykanka u soo bandhigeen qorshe canshuureed oo dhameystirneen oo lagu diyaariyay meela qarsoodi ah waxaa ayna doonayaan in Congress-ku ansixiyo iyada oo si fiican loo fahmin, run ahaantiina waan ognahay ujeedada laga leeyahay, taas oo ah in canshuurta lagu kordhiyo dadka heerka dhexe ah iyo in dowladda ay u suurta gasho inay qaadato deymo badan oo mustaqbalka culays ku noqdo jiilalka dambe." Ayey tidhi.